အစ္စလာမ်မတိုင်ခင်အရင် စလ်မန်ဖာရစီ (အင်္ဂလိပ်: Salman al-Farisi; အာရပ်: سلمان الفارسي‎ Salmān al-Fārisī) ၏ အမည်မှာ ရူးဇ်ဗေဟ် (Rouzbeh; ပါရှန်း: روزبه‎) ဖြစ်သည်။ ‎တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)၏ ဆွဟာဘာသာဝကကြီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ တမန်တော်မြတ်သည် ‎စလ်မန်ဖာရစီကို မိမိ၏ အိမ်တော်သူအိမ်တော်သားမှ ဖြစ်ကြောင်း မိန့်တော်မူခဲ့လေသည်။ ‎ထိုကြောင့် စန်မန်မိုဟမ္မဒီဟု ကျော်ကြားခဲ့လေသည်။ ကိုရိုက်ရှ် ရန်သူတို့သည် မဒီနာမြို့သို့ ‎လာရောက်တိုက်ခိုက်သည့် အခါတွင် စလ်မန်ဖာရစီသည် မဒီနာမြို့ပတ်ပတ်လည်တွင် ‎ခံတပ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ရန် အကြံပေးခဲ့သည်။ သာဝကကြီး စလ်မန်ဖာရစီသည် အထူးတဖြင့် ‎ရှီအာမွတ်စ္စလင်မ် ဘာသာဝင်တို့အကြား ဂုဏ်ရည်မြင့်မား၍ မြင့်မြတ်သည့် အရိုက်အရာရှိကြောင်း ‎သတ်မှတ်ထားကြသည်။
ခန္ဒက်စစ်ပွဲသည် ဟစ်ဂျရီခုနှစ် (၅)တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ စလ်မန်ဖာရစီ၏ အကြံပေးချက်ဖြင့် မဒီနာမြို့ကို ‎တူးမြောင်းတူး၍ ခံတပ်ပြုလုပ်ထားခဲ့သည်။ ခန္ဒက်သည် ဖာရစီစကားမှဖြစ်ပြီး အရဗီစကားသို့ ‎ကူးပြောင်းလာသည့် ဝေါ်ဟာရတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ တူးခြင်းဖြစ်သည်။ ‎ပါရစီရှေးဟောင်းစာပေများတွင်‏ «کن» ‏‎ ဆိုသည့်မူရင်းပုဒ်မှဆင်းသက်လာပြီး တူးခြင်းဆိုသည့်အဓိပ္ပာယ်ကို ‎ဖော်ဆောင်သည်။ ထိုအဓိပ္ပာယ်နှင့်ဝေါ်ဟာရကို ယနေ့တိုင် အီရန်နိုင်ငံဖာရစီ ဘာသာစကားတွင် ‎အသုံးပြုလျက် ရှိသည်။ စလ်မန်ဖာရစီကို မဒီနာမြို့ရှိ မျိုးနွယ်စုတို့သည် မိမိတို့နှင့်အတူ ‎နေထိုင်စေချင်ကြသည်။ ထိုကြောင့် မိုဟာဂျိရ် မက္ကာမြို့မှမဒီနာသို့ ပြောင်းရွှေ့လာကြသူများသည် စလ်မန်ကို ‎ကျွန်ုပ်တို့မျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။ ထိုကြောင့် အန်ဆွာရ် မဒီနာမြို့သားတို့သည်လည်း ‎စလ်မန်သည် ကျွနု်ပ်တို့မျိုးနွယ်ဝင်စုဖြစ်သည်ဟု ဆိုလာကြသည်။ ထိုအခါ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည်လည်း ‎စလ်မန်သည် ငါကိုယ်တော်မြတ်၏ အဲဟ်လေဘိုင်သ် အိဿရိ အနွယ်တော်မွန်ဖြစ်ကြောင်း မိန့်ဆိုခဲ့သည်။
↑ Jestice၊ Phyllis G. (2004)။ Holy People of the World: A Cross-cultural Encyclopedia, Volume 1။ ABC-CLIO။ p. 761။ ISBN 978-1576073551။
↑ الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۱۱۱ و الوفی بالوفیات ج ۵ ص ۹۸။ 13 May 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 December 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ قبل از ظهور اسلام Archived 19 November 2009 at the Wayback Machine. تاریخ ایران
↑ شناخت هویّت ایرانی از زمان فردوسی تاکنون Archived 22 May 2010 at the Wayback Machine. مرتضی ثاقب فر - سخنرانی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در «همایش هویّت و حاکمیت ملی ایران «در ۲۷ بهمن ۱۳۸۳، منتشره در ماهنامه ایران‌مهر به تاریخ اسفند ۱۳۸۳
↑ سابقهٔ تاریخی اسکان قبایل عرب در خوزستان Archived 14 October 2008 at the Wayback Machine. دکتر امیرحسین خنجی - دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۱ - ایران امروز
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စလ်မန်ဖာရစီ&oldid=698849" မှ ရယူရန်